Izicishamlilo nezikhungo zokutakula - Ukubonisa okulula okuningana - izimpawu ezidijithali
Izikhungo zokucisha imililo nezokusindisa
I-Easy Multi Display isiza izicishamlilo emsebenzini wazo wansuku zonke!
"Besifuna isoftware yokwenza ngcono isikhathi sethu sokuphendula futhi sithole i-Easy Multi Display!"
ILoiret Departmental Fire and Rescue Service (SDIS) iyisikhungo somphakathi esise-Orleans futhi sibekwe ngaphansi kwegunya likaphethe nomongameli webhodi labaqondisi.
I-SDIS yenza izinhlobo eziningana zemishini efana nosizo oluphuthumayo kwabasengozini yezingozi, ukuvikelwa komuntu siqu noma ukuvikelwa kwezingozi zokuphepha komphakathi, phakathi kokunye.
Isikhungo sokutakula sikhethe uhlobo lwebhizinisi lwe-Easy Multi Display ukuze sikwazi ukufinyelela kurimothi. Le nguqulo ibavumela ukuthi babonise okuqukethwe ezikrinini ezifika kwezingu-6 nezindawo ezingama-24 ngasikhathi sinye.
Ngaphezu kwalokho, bathole nokuqeqeshwa okuphelele ngesoftware ukuze bakwazi ukuyisebenzisa kahle futhi basebenze ngokushesha okukhulu.
Isikhungo sokutakula saseLoiret besifuna isoftware entsha yokubonisa yedijithali yesikhungo sayo somyalo nesokuchichima.
Le software bekufanele isheshe, isebenze kahle futhi iphelele kakhulu ukwenza ngcono isikhathi sokuphendula sabacimi bomlilo. Bakhethe i-Easy Multi Display ngokusebenza kwayo kepha neqembu elisebenza kwisoftware futhi elihlala lilalela i-SDIS ngenhloso yokwengeza njalo izici ezintsha.
Qalisa ukusebenza ngokushesha okukhulu!
I-Easy Multi Display kulula ukuyifaka futhi inqubo yokufunda nayo iyashesha kakhulu, zisebenze ngosuku olufanayo!
Thuthukisa ukudluliswa kolwazi
Kubaluleke kakhulu esikhungweni sokutakula ukuthi ukudluliswa kolwazi kusheshe ngangokunokwenzeka, i-Easy Multi Display yenza kwenzeke!